Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda si ay u soo iibsadaan Kaaliyaha Khaaska ah | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaWasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda si ay u Iibsato Kaaliyaha Takhasuska leh
Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda
Khabiirrada Maaliyadda iyo Kaaliyaha Dhaqaalaha ayaa loo qori doonaa inay kaqeeyaan qeybaha soo socda iyo lambarrada ku yaal Ankara iyo Istanbul iyagoo qaadanaya imtixaanka gelitaanka wadar ahaan 100 Kaaliye Maaliyadeed iyo shaqaale ku takhasusay Maaliyadda oo ka banaan xarunta dhexe ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda.
QAYBTA (AREA) XAALADAHA AREA XIGASHO kootada
SHARCIGA HUK-1 ANKARA 8
dhaqaalaha OIC-1 ANKARA 12
GANACSIGA MAN-1 ANKARA 11
MAALIYADDA MLY-1 ANKARA 6
XIRFADA GALMUDUG Uli-1 ANKARA 3
MAAMULKA FARSAMADA Mak-1 ANKARA 2
XIRFADAHA kombuyuutar Bil-1 ANKARA 4
INTERNETAL ENGINEERING END-1 ANKARA 7
SHARCIGA HUK-2 Istanbul 2
dhaqaalaha OIC-2 Istanbul 12
GANACSIGA MAN-2 Istanbul 11
XIRFADAHA kombuyuutar Bil-2 Istanbul 1
INTERNETAL ENGINEERING END-2 Istanbul 9
Meelaha imtixaanka lagu qabanayo iyo meelaha waajibaadka lagu muujiyey TABLE 1 iyo TABLE 2. Musharixiinta ayaa ka sameyn doona xulashooyinkooda hal miis iyo aag sida waafaqsan gobolka ay rabaan inay u adeegaan. Musharixiinta ayaa si gooni ah loo qiimeyn doonaa marka loo eego labada shax iyo meelaha miiska lagu siinayo.
II- TAARIIKHDA TAARIIKHDA iyo Goobta:
a) Imtixaanka gelitaanka ayaa lagu qaban doonaa Ankara.
t) Taariikhda imtixaanka gelitaanka, murashaxiinta u qalma inay galaan imtixaanka gelitaanka iyo meelahooda laga soo galo waxaa lagu shaacin doonaa ugu yaraan 10 maalmood ka hor imtixaanka bogga internetka ee Wasaaradda Lacagta iyo Maaliyadda (www.hmb.gov.tr). Murashaxiinta si gaar ah looma ogeysiin doono.
III- SHURUUDAHA SHURUUDAHA:
Shuruudahan guud iyo kuwa gaar ahaaneed ee soosocda waxaa looga baahan yahay murashaxiinta dalban doona imtixaanka gelitaanka Khasnadda Dhaqaalaha iyo Kalkaaliyaha Maaliyadda illaa waqtiga kama dambeysta ah (07/02/2020).
A- Xaaladaha Guud
t) In uusan gaarin da'da soddon iyo shan (35) maalinta ugu horeysa ee Janaayo ee sanadka la qabanayo imtixaanka gelitaanka (codsadayaashu waxay dhasheen 01/01/1985 iyo wixii ka dambeeya)
c) Awoodaha sharciga, cilmiga siyaasada, dhaqaalaha, maamulka ganacsiga, cilmiga dhaqaalaha iyo maamulka, dhismaha, injineerinka, sayniska, suugaanta, isgaarsiinta, iyo kuliyadaha kale ee bixiya ugu yaraan afar sano oo ah shahaadada koowaad ee jaamacadda, 1 iyo TABLE 2,
) Inaad ansax ka noqoto Imtixaanka Aqoonta Luuqada qalaad (YDS) ee laxiriira luuqada Ingriiska ama dukumenti kale oo ay aqbashay Qiimaynta Golaha Tacliinta Sare TC, Xulashada iyo Xarunta Meelaynta inay lahaadaan
d) In la qaato Imtixaanka Xulashada Shakhsiyadeed ee Dadweynaha (KPSS) oo ay qabatay OSYM sannad dugsiyeedka 2018 iyo 2019 iyo in la helo dhibco sax ah oo lagu sheegay qaybta shuruudaha gaarka ah,
e) In codsiga lagu sameeyo muddadii loo qabtay.
B- Xaaladaha Gaarka ah
a) Dhanka sharciga;
Si aad uga qalin jabiso waaxda Sharciga,
Haysashada ugu yaraan 4 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
1-codsadeyaal ee ugu horreeya ee duurka ku yaal HUK-32,
Inaad ka mid noqoto 2-da murashax ee ugu horreysa ee ka tirsan HUK-8,
b) Dhanka dhaqaalaha;
Ka qalin jabiyay Waaxda Dhaqaalaha,
Haysashada ugu yaraan 14 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
1-ka ugu horeeya ee duurka OIC-48, ee codsadayaasha,
Inaad ka mid noqotid 2da musharrax ee ugu horreysa OIC-48,
c) Aagga ganacsiga;
Ka qalin jabiyay Waaxda Maamulka Ganacsiga,
Haysashada ugu yaraan 25 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
1 kii ugu horreeyay ee garoonka İŞL-44,
Inaad ka mid noqoto 2ka murashax ee ugu horreysa fieldL-44 garoonka, ç) Qeybta maaliyadda;
Ka qalin jabiyay Waaxda Maaliyadda,
Haysashada ugu yaraan 19 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
Marka loo eego qiimeynta codsadayaasha, 1ka koowaad
inuu noqdo musharrax
d) Dhanka Xiriirka Caalamiga;
Waxaa ka qalinjabiyey Waaxda Xiriirka Caalamiga,
Haysashada ugu yaraan 34 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
Inaad ka mid noqotid 1-ka musharax ee ugu horeeya goobta ULI-12 iyadoo loo eegayo darajada lagu sameyn doono codsadayaasha,
e) Dhanka cilmiga dhaqaalaha;
Haysashada ugu yaraan 13 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
Inaad ka mid noqotid afartan murashax ee ugu horreysa goobta EKO-1 sida ku xusan amarka lagu sameeyo codsadayaasha,
f) Qeybta tirakoobka;
Si aad uga qalin jebiso waaxda tirakoobka,
Haysashada ugu yaraan 12 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
Inaad ka mid noqoto 2-da murashax ee ugu horreysa garoonka IST-8 iyadoo loo eegayo qiimeynta laga dhex sameyn doono codsadayaasha,
g) Injineerinka farsamada;
Waxaa ka qalinjabiyey waaxda injineerinka farsamada,
Haysashada ugu yaraan 1 dhibcood nooca dhibcaha ee KPSSP-75,
Inaad ka mid noqoto 1-da musharrax ee ugu horreysa goobta MAK-8 iyadoo la raacayo amarka lagu sameeyo codsadayaasha,
ğ) Loogu talagalay Injineerinka Kombiyuutarka;
Ka qalin jabiyay waaxda injineerinka kombiyuutarka,
Inaad ka mid noqoto 1ka musharrax ee ugu horreeya B inL-16 iyo afarta musharrax ee ugu horreeya ee BİL-2,
h) Injineerinka Warshadaha;
Ka qalin jabiyay waaxda injineerinka warshadaha,
Inaad ka mid noqoto 1ka murashax ee ugu horreeya garoonka END-28 iyo 2ka musharrax ee u horreeya END-36,
Ayaa loo baahan yahay.
a) TABLE 1 wuxuu muujinayaa meelaha leh Ankara halka TABLE 2 ay muujineyso aaggan leh Istanbul. Musharixiintu waxay dooran karaan mid uun meelaha ku taxan TABLE 1 ama TABLE 2, ayaga oo tilmaamaya lambarka aagga.
b) Codsiga imtixaanka gelitaanka waa in lagu sameeyaa elektiroonig ahaan websaydhka Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda (www.hmb.gov.tr) laga bilaabo 27/01/2020 illaa dhammaadka saacadaha shaqada ee 07/02/2020 (17:30 saacadood).
c) Dibloomada ayaa la xirayaa inta lagu gudajirayo arjiga iyaga oo iskaaraya shahaadada u dhigma, haddii ay jiraan, iyo YDS ama dukumiinti kale oo natiijada imtixaanka u dhigma. Haddii loo arko inay lagama maarmaan tahay, dukumiintiyada laga codsanayo codsadeyaasha waxaa lagu meelaynayaa bogga dalabka.
) Nuqul saxeexan ee Foomka Codsiga iyo lifaaqyada la oggolaaday; waa in lagu geeyaa cinwaanka ku xusan “Macluumaadka lala Xiriirka ee kuqoran ogeysiiskan gacanta ama laguugu soo diray boostada. Codsiyada aan ku imaan waqtigii loogu tala galay dib-u-dhigga boostada dib looma baarayo.
Imtixaanka gelitaanka waxaa lagu sameyn doonaa nidaamka afka.
Musharaxiinta waxaa lagu kala saari doonaa laga bilaabo dhibcaha ugu sareeya ee KPSS dhibic walba oo ku taxan TABLE 1 iyo TABLE 2, waxaana lagu casuumi doonaa musharixiinta imtaxaanka ilaa afar jeer tirada kootada. Murashaxiinta hela dhibco isku mid ah sida musharraxii ugu dambeeyay waxaa lagu casuumayaa imtaxaanka gelitaanka.
MAWDUUCA VI- Imtixaan:
Mawduucyada imtixaanka gelitaanka ayaa hoos ku taxan.
a) Meesha Sharciga: Mabaadi'da Aasaasiga ah ee Sharciga, Sharciga Maamulka (Qaybaha Guud-Garsoorka Maamulka),
Sharciga Madaniga ah (Marka laga reebo Sharciga Qoyska iyo Qodobada Dhaxalka), Sharciga Waajibaadka (Mabaadiida Guud), Sharciga Ganacsiga (Ganacsiga Ganacsiga, Sharciga Shirkadaha, Sharciga Wadahadalka, Sharciga Caymiska), Fulinta iyo Sharciga Musalafnimada, Sharciga Shaqaalaha iyo Sharciga Amniga Bulshada,
b) Dhaqaalaha Area: Macroeconomics, Microeconomics, Turkey dhaqaalaha, dhaqaalaha caalamiga ah, Money iyo Banking, Econometrics,
c) Goob Ganacsi: Fikradaha Ganacsiga Aasaasiga ah, Maareynta Ganacsiga, Soosaarka iyo Maareynta Maaliyadda, Maaliyadda Ganacsiga, Falanqaynta Bayaanka Maaliyadeed, Xisaabaadka,
Area) Aagga Maaliyadda: Maaliyadda Dadweynaha (Kharashyada Dadweynaha, Dakhliga Dadweynaha, Miisaaniyadda iyo Maaliyadda Dadweynaha), Siyaasadda Maaliyadeed, Xisaabaadka,
d) Xiriirka Caalamiga ah: Sayniska Siyaasadeed, Taariikhda Siyaasadeed, Siyaasadda Dibadda ee Turkiga, Sharciga Caalamiga ah,
e) Dhaqaalaha: Maamulka Masaafada Least, Noocyada aasaasiga ah ee Moodooyinka Dib-u-dhiska, Qiyaasta iyo Dhibaatooyinka Is-dhexgalka ee Horumar badan, Moodellada taxanaha Waqtiga fudud, Tirakoobka Aasaasiga ah,
f) Tirakoobka: Xisaabinta suuragalnimada, Farsamooyinka Saambalka, Falanqaynta taxanaha Waqtiga, Hababka Bakhaarada,
g) Injineerinka Farsamada: Xoog, Tamarta, Waxsoosaarka, Heerkulka, ku wareejinta kuleylka, Farsamada Farsamooyinka, Xakameynta,
ğ) Injineerinka Kombiyuutarka: Barnaamijyada kumbuyuutarka, xisaabinta iyo Codsiyada Injineerinka, Maareynta Xogta, Shabakadaha kumbuyuutarrada, Qaab dhismeedka macluumaadka iyo algorithmka, Internetka iyo Amniga Macluumaadka, Nidaamyada Howlgalka, Injineerka Software,
h) Injineerinka Warshadaha: Cilmibaarista Hawlaha, Falanqaynta Nidaamka, Nidaamka Maareynta Wax Soo Saarka, Qorsheynta Wax Soo Saarka, Nidaamyada Macluumaadka Maareynta, Xisaabaadka Maaliyadda.
a) Heerka aqoonta maadooyinka uu ku qaatay imtixaanka,
e) U furfurida horumarinta sayniska iyo farsamada,
waxaa lagu qiimeyn doonaa iyadoo si gaar ah loo siinayo dhibco.
Murashaxiinta waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo lagu saleynayo konton qodob oo ka mid ah farqadiisa (a) iyo toban dhibcood cutub kasta oo ka hooseeya sadarka (b) illaa (e).
Si loo tixgeliyo inuu ku guuleystay imtixaanka gelitaanka, celceliska buundada uu siiyay gudoomiyaha iyo xubnaha komishanka in ka badan boqol dhibcood waa inay ahaadaan ugu yaraan toddobaatan dhibcood.
Qeyb kasta (adoo qiimeynaya goob walba si gooni gooni ah TABLE 1 iyo TABLE 2), iyadoo loo eegayo darajada guusha laga bilaabo natiijada ugu sareysa, tirada musharixiinta lagu dhawaaqay waxaa lagu dhawaaqi doonaa asalka halka ugu badnaan ee musharixiinta lagu dhawaaqi doono beddelka. Haddii dhibcuhu ay isku mid yihiin, dhibcaha sare ee dhibcaha KPSS iyo dhibcaha luqadda ajnabiga ah ee lagu dabaqo imtixaanka gelitaanka, siday u kala horreeyaan, ayaa mudnaan la siin doonaa.
Toddobaatan iyo wax ka badan oo imtixaanka gelitaanka ah xaq uma lahan musharixiinta aan u qalmin.
Murashaxiinta ku guuleysta Imtixaanka gelitaanka waxaa loo xilsaari doonaa unugyada adeegga ee xarunta dhexe ee Wasaaradda si ay uga shaqeeyaan Ankara ama Gobolka Istanbul halkaas oo ay doorbidaan inta lagu gudajiro imtixaanka.
IX- Waxyaabaha Kale:
a) Musharixiintu waa inay lahaadaan dukumenti aqoonsi ansax ah (karaka aqoonsiga, laysanka darawalka ama baasaboor leh Lambarka Aqoonsiga Jamhuuriyada turkiga) ee loo isticmaali doono aqoonsiga imtixaanka.
b) Codsadeyaasha lagu helo inuu warbixin been abuur ah ka sameeyay foomka dalabka looma arko inuu yahay mid aan shaqeyn oo ballantooda lama fulin. Waa la tirtirayaa xitaa haddii loo xilsaaray. Ma sheegan karaan wax xuquuq ah.
c) Dacwad dambi waa in loo fayl gareeyaa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Ankara si loogu dabaqo qodobada laxiriira ee Xeerka Ciqaabta Turkiga ee no.
As) Maaddaama codsiyada aan imaanin illaa dhammaadka saacadaha shaqada ee 07/02/2020 (17:30) aan tixgelin la siinin, codsadayaashu waa inaysan uga tagin codsiyadooda maalinta ugu dambaysa iyagoo tixgelinaya dhibaatooyinka kale ee dhici kara ama ka dhici kara deegaanka elektiroonigga ah.
Wasaaradda Maaliyadda iyo Maareeyaha guud ee maaliyadda ee shaqaalaha
Qeybta Adeegyada Imtixaanka Qolka 3aad Dabaqa No: 308
Telefoon: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55
Shaqaalaysiinta Khabiirka Khasnajiga Maaliyadeed